Ubukhali bubonisa uyilo lwefowuni yokuqala yokusonga | I-Androidsis
Kwi-2019, icandelo lokusonga i-smartphone kulindeleke ukuba lithathe inyathelo elikhulu. Iimodeli zokuqala zifika kungekudala ezivenkileni, ukongeza, kukho iintlobo ezininzi kwi-Android banokukhulula enye ngaphambi kokuphela konyaka. Uluhlu lweenkampani esinokuthi sidibanise kuzo ngoku. Kungenxa yokuba ifemu yaseJapan inefowuni esongelayo kuphuhliso, uyilo lwayo sele lubonakele.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwafika amarhe okuqala malunga nokuba kungenzeka ukuba uSharp uza kusungula ifowuni esongelayo. Kwiveki ephelileyo ipatent sele ivuza kwaye ngoku sinevidiyo noyilo lwakho. Ke izicwangciso zenkampani ziya zicaca njengoko iiveki zihamba.
Ngale ndlela, uphawu luzinikele kwisikrini se-AMOLED kwisixhobo. Siscreen esinye, njengoko ubona kwividiyo, esisongelwe kwisiqingatha. Njengoko besitsho eSharp, kuvavanyo olungaphezulu kwama-300.000 ngaphandle kokonakala okanye ukusilela kwesixhobo kunye noomatshini.
Inyani yokuba sifumana inotshi kweso sikrini iyamangalisa. Isikrini, ubuncinci ngokolu lwazi lufunyenweyo, inobungakanani bee-intshi eziyi-6,18. Ukongeza, inesisombululo seepikseli eziyi-1440 x 3049. Inqaku elinomdla kukuba ifowuni ayihlali ngaphakathi kuphela. Kodwa ikwasonga.
Ngokuqinisekileyo le yinto enokwenza ukuba le modeli ye-Sharp ijike iintloko. Kuba kwiimodeli esele sizibonile ukuza kuthi ga ngoku, isixhobo sihlala sisongelwe kwicala elinye. Kodwa uphawu lubonisa prototype enokusongwa ngeendlela ezimbini, ngaphandle kweengxaki ekusebenzeni.
Ngelishwa, USharp uqobo uthi le fowuni ayizukwenzeka okwangoku. Ingathabatha iminyaka embalwa ukuze igqitywe. Ngokunokwenzeka ukuze iindleko zemveliso ziphantsi kwaye ke ngoko zisungule imodeli enexabiso elifikelelekayo ngakumbi. Kusenokwenzeka ukuba kunjalo Kuya kufuneka ulinde ubuncinci kude kube yi-2021.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sharp sele ibonisa uyilo lwe-smartphone yayo esongwayo